Wiil dhalinyaro ah oo la gowracay.dil naxdin leh | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Wiil dhalinyaro ah oo la gowracay.dil naxdin leh
Wiil dhalinyaro ah oo la gowracay.dil naxdin leh
Faahfaahin dheerad ah ayaa ka soo baxeyso Dhacdo aad u Xanuun badan oo naxdin ku abuurtay dadka degaanka oo ka dhacday Dowlad degaanka Soomaali Galbeed.
Dhacdadaan ayaa si gaar ah uga ka dhacday Magaalaada Dhagaxbuur waxaana ay la yaab ku noqotay Bulshada ku nool Magaaladaas kadib markii dil fool xun loogu gaystay Maxamad Cabdi Budul oo ahaa wiil dhallinyaro ah oo ku nool halkaasi .
Wararka ayaa tilmaamaya in Marxuumka la dilay oo ballamiyay sida la sheegay Nin uu lacag ku lahaa, kaasi oo sida la tilmaamay shir qool u diyaariyay marxuumka, waxaana la sheegay in uu gowracay markii uu u yimid Maxamad Cabdi Budul oo ah Marxuumka la gawracay.
Durba Ciidanka ammaanka ayaa gaaray goobta falka gowraca ahi uu ka dhacay, waxaana ay sameeyen howlagallo lagu soo qab-qabtay eedeysanihii la sheegay in uu gowracay marxuum Maxamad Cabdi Budul iyo dad la sheegay in ku lug leeyihiin falka, sidoo kale waxaa jira sida laamaha booliska ay sheegeyn tuhmanayaal kale oo iyagana lagu raad joogo.
Dhacdada oo ah mid aad u fool xun ayaa dadka degaanku waxaa ay sheegeen in aysan horay uga dhicin degaanka iyo guud ahaa Magaalada dhagaxbuur we dowlad degaanka Soomaalida itoobiya.
Maqaal horeRa’iisul Wasaare Rooble oo la kulmay Safiirka Turkiga.
Maqaal Xiga27 ruux oo geeriyootay kadib dagaal culus oo ka dhacay…